Tue, Sep 29, 2020 at 12:11am
साउनमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व,
कैलालीस्थित भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाउन सफल भएका छन् । सत्ती भन्सार कार्यालय खक्रौला, कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढी र आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको हो । सत्ती भन्सार कार्यालय खक्रौलामा साउन महिनाको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५७५ प्रतिशत बढी असूली भएको छ । भन्सारले साउनका लागि रु ३६ लाख..
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा नेपाललाई सघाउन विश्व बैंकसँग आग्रह
काठमाडौं, ६ भदाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप सहयोगका लागि विश्व बैंकसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरबीच कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे खतिवडाले शुक्रबार छलफल गरेका हुन् । कोभिड–१९ को असर कम गर्न विश्व बैंकको सहयोगप्रति खतिवडाले धन्यवाद व्यक्त गरे । भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको छलफलमा नेपालले आगामी दिनमा..
निषेधाज्ञाकाे पहिलाे दिनदेखिनै तरकारीको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि
काठमाडौँ, ४ भदाै। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा गरेकै दिनदेखि तरकारी र फलफूल मूल्य झन्डै ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको गोरखापत्रमा खबर छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबारको तुलनामा बिहीबार मुख्य तरकारीको भाउ थोकमै १० देखि ८० प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । बजारमा तरकारीको आपूर्ति सामान्य भए पनि माग बढी भएकाले मूल्य बढेको हुनसक्ने अनुमान समितिले गरेको छ ।..
एकैदिन ताेलामा १६ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, यस्ताे छ आजकाे मूल्य
काठमाडौं, ४ भदाै । विहिबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मुल्यमा गिरावट आएको छ । बुधबार स्थिर रहेको सुनको मुल्य विहिबार एकै दिन तोलामा १६ सयले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विहिबार सुन प्रति तोला ९८ हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यस अघि सोमबार र मंगलबार सुन एक लाख ४ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै..
फेरि १ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य, कति बढ्याे एक ताेलामा ?
काठमाडौं, २ भदाै । सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख रुपैयाँ पार गरेको हो । यसअघि सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३ हजार ५०० सम्म पुगेर घट्दै गएकोमा बुधबार फेरि बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ९८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार बढेर १ लाख ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको..
घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा काराेबार हुदैछ आज ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमवार सुनको मूल्य तोलामा ९८ हजार २०० रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोवार भएको छ । आइतवार तोलामा ९८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोवार भएको सुनको मूल्य सोमवार तोलामा ९८ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९७ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यस्तै सोमवार चाँदी तोलामा १३ सय १५ रुपैयाँमा कारोवार भएको नेपाल सुनचाँदी..
फेरी बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, ग्यास र हवाई इन्धनकाे मुल्य भने यथावत
काठमाडौं, १ भदाै । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाएको हो । निगमका अनुसार यी सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले बढेको हो । यससँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ९१ रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले भारतबाटै नेपाल आउने तेलको मूल्य..
प्रतिताेला २ सय रूपैयाँले घट्याे सुनकाे भाउ, कति पुग्याे आज ?
काठमाडौं, ३२ साउन । आइतबार नेपाली बजार सुनकाे मूल्य घटेकाे छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रूपैयाँले घढेको हाे। शुक्रबार प्रतितोला ९८ हजार ६०० रुपैयाँ कायम रहेको सुनको भाउ आज ९८ हजार ४०० रूपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ। यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज तेजाबी सुनको मूल्य ९७ हजार ९०० रूपैयाँ तोकिएको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रतिताेला १ हजार ३..
काठमाडौं, ३१ साउन। कोरोना कहरका कारण यतिबेला संसार नै आक्रान्त भएका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । अन्य क्षेत्र जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थासमेत कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य..
काठमाडाैं, ३० साउन। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । आज ८ सयले बढ्दै सुन प्रतितोला ९८ हजार ६०० मा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि ६० रुपैयाँ बढेर १,३५५ मा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार एकै दिन ६ हजार २०० ले घट्दै प्रतितोला ९५ हजार ४०० मा कारोबार भएको सुन विहिबार २,४०० ले बढेर पुनः उकालो लागेको..
एकै दिन प्रतितोला २४ सयले बढ्यो सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे आज ?
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ तलमाथि हुनु स्वभाविक हो । यही क्रममा हिजो (बुधबार) प्रतितोला ६ हजार २ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ आज (बिहीबार) पुन: बढेको छ । गत साता मात्रै मूल्यमा रेकर्ड कायम गरेको सुनको भाउ हिजो (बुधबार) एकै दिन ६ हजार २ सय रुपैयाँले झरेको थियो । आज (बिहीबार) छापावाल सुन प्रतितोला २४ सय रुपैयाँले बढ्दै..
सुनमा ऐतिहासिक गिरावट, एकै दिन प्रतिताेला ६ हजार २ सयले घट्याे
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक गिरावट आएकाे छ । सुनकाे मूल्य आज प्रतिताेला ६ जार २ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे । मंगलबारको प्रतिताेला एक लाख एक हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएकाे सुनकाे मूल्य बुधबार तोलामै ६ हजार २ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला ९५ हजार ४ सय रुपैयाँमा झरेको छ । एकै दिन तोलामा ६..
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको भने बढ्यो
काठमाडौं, २७ साउन । केहि समयदेखि निरन्तर बढ्दै आएको सुनको मूल्य आइतबारदेखि भने घट्न थालेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुन ९ सयले घटेको थियो । सोमबार २ सयले घट्दै सुन प्रतितोला १ लाख २ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज सुन ८ सयले घटेको छ । सुन आज १ लाख १..
साेमबार पनि घट्याे सुनचाँदीकाे मूल्य, कति पुग्याे आज ?
काठमाडौं, २६ साउन । सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएकाे छ । सुनको मूल्य आइतबारभन्दा साेमबार २ सय रुपैयाँ प्रतितोलाले सस्तिएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला एक लाख दुई हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन सोमबार एक लाख दुई हजार चार सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । छापावाल सुन सस्तो बन्दा तेजाबी सुनको मूल्य पनि २..
काठमाडौं। महिना दिनभर तपाईँले औसतमा कति मूल्य बराबरको विद्युत् उपभोग गर्नुहुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा तपाई आफैँले गर्न सक्नुहुने भएको छ। तपाईँलाई धेरै विद्युत् खपत हुन्छ भन्ने लागेको खण्डमा बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ, कम खपत गर्छु भन्ने लागेको छ भने कम महसुल तिर्दा हुने भएको छ। यस्तै, आगामी महिनाको विद्युत् महसुल पनि यसै महिना तिर्छु भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने त्यो पनि गर्न..
अब अनलाइनबाटै किन्न सकिन्छ गाडी
काठमाडौं। टाटा मोटर्सका व्यावसायिक गाडी विक्री वितरणका लागि सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.को आधिकारिक डिलर शशिला मोटर्स प्रा.लि.ले गाडी खरिदका लागि अनलाईन सुविधा दिने भएको छ। कोभिड १९ का कारण विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने भएकाले घरमै बसेर आफूले खोजेको गाडी बुकिङ गर्न मिल्ने सुविधाको शुभारम्भ गरेको मोटर्सले जनाएको छ। कम्पनीले अनलाइनमार्फत नेपालमै पहिलो पटक यो सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। यससँगै अब उपभोक्ताले..
काठमाडाैं, २३ साउन । कोरोनाको सङ्क्रमण बढेदेखि नै दैनिक कीर्तिमान बनाइरहेको सुनको भाउले आज अर्को रेकर्ड बनाएको छ । सुनको भाउ आज तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढेर तोलाको एक लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो तोलामा ११ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको एक लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो..
Results 1763: You are at page2of 59